Filtrer les éléments par date : lundi, 21 juin 2021
lundi, 21 juin 2021 16:46
Sampana Mpamonjy Voina - Antananarivo Renivohitra : Niampy ny fitaovana ho ampiasainy
Nontanterahina androany 21 jiona 2021 ny lanona ofisialy amin’ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny avy eo amin’ny BNGRC izay natao tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.
Ny voatoatiny fanaovan-tsonia eo amin’ny roa tonta dia ny fampindramana mandritra ny fotoana tsy voafetra «camion à bras élévateur articule » fiara be ho ampiasain’ny Sampana Mpamonjy Voina, izay avy an’ny amin’ny BNGRC mba hialana amin’ny loza. Mba ahafahana mamonjy ny vahoaka sy ny fananany.
Anisany filana lehibe an’ny mpamonjy voina io fitaovana io satria ny tanàna dia mihamitombo ny trano avo, ary mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany.
Ny fiara be dia natao hamonoana afo sy hamonjena olona voageja eny amin’ny toerana avo, na trano avo sy ny fananany.
lundi, 21 juin 2021 16:01
Fanondranana volamena : Nahemotra ny fandinihana ny lalàna Mohamad Ahmad
Nahemotra ho amin’ny fotoana manaraka ny fandinihana ny tolo-pehin-kevitra momba ny fanondranana volamena, izay natolotry ny Solombavambahoaka Mohamad Ahmad, noho ny tsy mbola maha eto an-toerana ny tenany sy mba hahafahana mamakafaka izany maharitra kokoa, satria raharaha lehibe ny ady amin’ny fanondranana volamena an-tsokosoko.
lundi, 21 juin 2021 15:55
Rinah Rakotomanga : Voatendry ho Mpanolontsaina eo anivon'ny Masoivohon'i Madagasikara ao Paris - Frantsa
Ny 08 Jona 2021 i Rinah Rakotomanga no nahazo ny taratasy nanendry azy ho Mpanolontsaina eo anivon'ny Masoivohon'i Madagasikara ao Paris – Frantsa, araka ny fampahafantarana nataony tao amin’ny pejiny facebook.
Androany 21 Jona 2021 ny tenany no nandray io asany vaovao io.
« Fifaneraserana, fifampiresahana, fikarakarana sy fikolokoloana ny fifandraisana, asa manasoa ny firenena hoan'ny tanindrazana ! », hoy i Rinah Rakotomanga namarana ny fampahafantarana nataony.
lundi, 21 juin 2021 15:47
Lozam-pifamoivoizana RN13 : Mpiasan'ny fahasalamana iray namoy ny ainy, telo naratra
Nisehoana lozam-pifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-13 (RN13), teo anelanelan' i Betroka sy Ihosy, Faritra Ihorombe, ny alahady 20 Jona 2021 tolakandro.
Namoy ny ainy tamin’izany ny Mpiasan'ny fahasalamana iray, ary nisy efatra mianadahy hafa, Mpiasan'ny fahasalamana avy ao amin'ny PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme), DLMT (Direction de la Lutte contre les Maladies Transmissibles) naratra.
Efa nivoaka ny Hopitaly CHRD Ihosy omaly ihany ny telo tamin'ireo olona efatra naratra rehefa avy nahazo ny fitsaboana sahaza.
Ny iray no mbola manaraka fitsaboana any an-toerana, tsy misy ahiana ny ainy raha ny fampitam-baovao voaray io maraina io.
lundi, 21 juin 2021 15:27
Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika : Iza moa ny Jeneraly Sahivelo Monja Lala Délphin ?
Ny Jeneraly Sahivelo Monja Lala Délphin no Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika vaovao.
Nianatra tao amin’ny Sekoly Miaramilam-Pirenena tao Fianarantsoa izy, ary nahazo ny diploma bakalorea Teknika ny taona 1985.
Ny taona 1986 no niditra ho andiany faha-17 tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe ny tenany, ary nivoaka ny taona 1989, ka tao amin’ny « Bataillon de sécurité de la Primature » no niasany voalohany teo amin’ny toeran’ny Lehiben’ny Holafy.
Nitazona andraikitra maro teo anivon’ny Tafika ny Jeneraly Sahivelo Monja Lala Délphin, ary manana mari-pahaizana maro momba ny Tafika ihany koa.
Efa Kaomandin’ny Sekolin’ny Manamboninahitra Lefitra na ENSOA Antsirabe izy ny taona 2012, taorian’izay dia nitazona ny andraikitra « Directeur des Ecoles et Formations Militaires » teo anivon’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika izy tamin’ny 2015.
« Coordonnateur Général des projets » teto anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena no andraikiny farany mialohan’izy lasa Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika izao.
Nanao fampitandremana amin'ny endrika fisolokiana ny ambasady amerikana eto Madagasikara sy Kaomoro.
Nambaran’ity farany fa mahalala ny fisiana fikambanana mitonona ho miara-miasa akaiky amin'ny ambasady amerikana amin'ny fampianarana teny anglisy, ary mampanantena mari-pahaizana atolotry ny ambasady amerikana.
« Tsy mitombona velively izany », hoy ny ambasady.
« Tianay ny mampahafantatra ny besinimaro fa, na dia miasa ho an'ny fampiroboroboana ny teny anglisy, sy manao ho laharampahamehana ny fampianarana teny anglisy aza izahay, dia tsy miara-miasa amina ivontoerana mampianatra teny anglisy sandaina vola », hoy hatrany ny fanazavana.
Mampirisika anao izahay hitafa aminay, hoy ny fanabaràna, raha mila fanazavana fanampiny mahakasika ireo hetsiky ny ambasady eto Madagasikara.
lundi, 21 juin 2021 11:37